Kulan aan caadi aheyn oo dhexmaray R/W CCC & safiirka Britain |
Kulan aan caadi aheyn oo dhexmaray R/W CCC & safiirka Britain
Wararka naga soo gaaraya Madaxtooyada Somalia ayaa sheegaya in R/W CCC uu xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha Dowlada Britain ee Magaalada Muqdisho Neil Wigan.
Kulanka labada Mas’uul ayaa ahaa mid ku saabsan xiriirka Dowladaha Somalia iyo Britain, iyadoona Labasa Mas’uul ay si gaar ah uga wada hadleen xal ka gaarista Khilaafyada ka taagan magacaabista Golaha Wasiirada Xukuumada Cusub.
R/W CCC iyo Neil Wigan, ayaa sidoo kale inta uu kulanka socday isla soo hadal qaaday Arrimo ay kamid ahaayen Doorashooyinka sanadka 2016-ka, in la dardargeliyo Barnaamijka Federalism-ka iyo dhameystirka Dastuurka Qabyo Qoraalka.
Britain waxay ka mid tahay dalalka sida dhow ula socdo dhaq dhaqaaqyada siyaasadda Somaliya. Britain waxay qayb ka tahay Dowladaha Reer Galbeedka ee dhaqaalaha ugu badan ku bixiya barnaamijyada Dowladda.
Dhanka kale, Ra’isul wasaaraha DF Somalia ayaa waxa uu xiligaani Caqabado kala duwan kala kulmayaa dhanka Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka iyo Xubno ka tirsan BF Somalia.